Shina: Aza adino ny anaran’izy ireny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2018 8:44 GMT
Nofihazan'ireo manampahefana shinoa ho anaty boaty mainty, toy ireo tsiambaratelom-panjakana, ny isan'ireo mpianatra namoy ny ainy tamin'ilay horohorontany tao Wenchuan tamin'ny 12 mai 2008. Tamin'ny Desambra 2008, nanapaka hevitra i Ai Wei-wei, artista no sady bilaogera manana ny hajany, fa hanoratra, miaraka amin'ny fanampian'ny tarika iray mpanao asa an-tsitrapo, ny anaran'ireo mpianatra maty tamin'ilay fihetsehan'ny tany. Hatreto, anarana ankizy 2.735 no efa voaangon-dry zareo, miaraka amin'ny adiresin'ireo ray aman-drenin'izy ireny [rohy amin'ny teny shina toy ny hafa rehetra atolotra ato anaty lahatsoratra]. Napetraka tety anaty tambajotra daholo ireo torohay rehetra, tao amin'ny bulloger.com, tranonkala iray any an-tsesitany mipetraka anaty lohamilina any ampitan-dranomasina, satria «voalamina» raha vao fifanakalozandresaka momba io hetsika santatra io no atao ao Shina
Fa maninona no tena feno faharisihana i Ai Wei-wei sy ny tarika miaraka aminy hanangona ireny anarana rehetra ireny? Na koa, nahoana ireo manampahefana shinoa no mitady izay hanafenana ireo tarehimarika sy ny anarana? Raha toa tsy manome fanazavana ireo manampahefana, Ai Wei-wei kosa manome ny heviny momba ilay tantara :
Andro 300 izay no lasa, nandeha tany amin'ny faritra nitrangan'ilay horohorontany aho, tao Wenchuan any Sichuan, ary hitako ny hirifiry sy ny horohoro tsy manam-piafaràna
Androany, mbola tsy haintsika ihany hoe iza no nandao antsika noho ilay horohorontany, ary nahoana sy tamin'ny fomba ahoana no nandaozan'ireny ankizy ireny antsika. Na izay tao an-tsain-dry zareo rehefa voafandrika tany anatin'ireo korontan-javatra ry zareo
Tsy dia nahavita zavatra firy aho nandritra ny nitrangan'ilay loza nahatsiravina, nahatsiaro ho tena motraka sy tsy ampy hery tamin'izay fotoana izay.
Ny nolazain'izy ireo, dia hoe tsy misy ifandraisany tamin'ny fisian'izy ireo mihitsy ny fahafatesan'ireo ankizy mpianatra. Nambaran'izy ireo fa tsy azo nihodivirana izany ary dia namelabelatra ny tohankevitra avy aminy ireo manampahaizana. Tsy nasian'izy ireo teny na dia kely aza ny momba ny kolikoly ary naleon'izy ireo tsy notenenina ny olana momba ny ‘asa fanorenana tamin'ny tofu (ireo trano sekoly naorina tsy nanaraka ny fenitra). Nosarontsaron'izy ireo ny zavanisy. Ary tamin'ny anaran'ny “fanaovana ho laharam-pahamehana ny fahamarin-toerana”, nandrahona izy ireo, nisambotra ary nanenjika ireo ray aman-dreny nikaroka ny marina sy nitady valinteny. Nohitsakitsahan-dry zareo ny lalàm-panorenana sy ny zo fototra maha-olombelona ny olona.
Tsy resaka tarehimarika fotsiny ireo ankizy maty tamin'ilay horohorontany, na hoe fampiharana ny fotokevitra ny «fahamarinan-toerana / fitoniana aloha»
Manana ray aman-dreny daholo ireny ankizy rehetra ireny, ary manana ny nofinofiny, ny tsikiny sy ny anarany. Azy ireo ny anarany, ho lasa fahatsiarovana ho azy ireo ny anarany, na dia tsy ho mandrakizay aza ilay fahatsiarovana – 3 taona, 5 taona, 18 na 19, ny anaran'izy ireo no hany sisa ho tsaroan'izao tontolo izao amin'ny hoavy.
Mila ifikirantsika ny fahatsiarovantsika ary ahilika ny lainga
Atombokay ny «fanadihadiana ataon'ny olompirenena» mba hahatsiarovantsika ireo namoy ny ainy, mba hikarakaràna ireo sisampaty. Raisinay ho andraikitra ny fitadiavana ny anaran'ireo mpianatra, mba hitoetra mandrakariva ny fahatsiarovana azy ireny.
Ary raha ny momba anareo izay tsy mino ny hetsika ataon'ny olompirenena, aoka ho tsaroanareo ity: tsy hanjavona ireny ankizy ireny raha toa ka manohy mijoro hatrany isika. Isan'ny antony ahavelomantsika izany ary tsy azontsika lavina.
Araka ny tatitra nataon'ny Xinhua tamin'ny Desambra 2008, nandritra ilay horohorontany tamin'ny 12 May, sekoly 14.000 taminà distrika 159 no rava, izay ny 91% dia sekolim-panjakana avokoa. Kanefa, tamin'ny fomba ofisialy, vokatry ny herin'ilay horohorontany no nampirodana ireo trano fianarana, ny ankamaroany, fa tsy noho ny tandrevaky ny olombelona tamin'ny fanorenana azy ireny
Na nisy na tsia ny hadisoan'ny olombelona tamin'ny «fanaovana fanorenana tamin'ny tofu», anjaran'ny fanadihadiana sy ny adihevitra hitranga eo ny amin'izany, fa na ahoana na ahoana, tsy ho mora ho an'ireo shinoa mpiondana aterineto ny hanohy hiresaka io olana io, satria “voalamina” ny hafanampon'i Ai Wei-wei ao anatin'ny aterineto shinoa. Araka ireo tondro nomen'ny lahatsoratra iray an'i Zhang3, tamin'ny 19 Martsa, nisy lahatsoratra iray nomena lohateny hoe «Tsy ho ela intsony ny Fetin'i Qing-ming, ndeha ho tsarovantsika miaraka ireo ankizy tradoza» navoaka tao amin'ny sehatra fifanakalozandresaky ny Tianya. Tao anatin'ny andro efatra, efa maherin'ny in-100.000 no nijerena ilay lahatsoratra ary naharaisana fanehoankevitra 3.000, ary niomana ny hikarakara tafatafa mivantana tamin'i Ai Wei-wei ilay sehatra fifanakalozandresaka. Saingy, tamin'ny tolakandron'ny 23 Martsa, nofafàna daholo izay rehetra lahatsoratra niresaka momba ilay izy. Ity no fanazavana :
Noho ny antony tsy fantatra, foana ny tafatafa nokasaina hatao miaraka amin'i Ai Wei-wei. Amin'ny alàlan'ity no ampahafantarako anareo rehetra izany, sy anolorako ny fialantsiny ho an'ireo rehetra namana ao amin'ny Tianya
Teo anelanelan'izany dia navoaka tao amin'ny bullogger.com ilay tafatafa, nozaraina ho roa: Voalohany sy faharoa. Ao anatin'ilay tafatafa, nohazavain'i Ai fa niriany ny hamarana ilay fanangonana mba hahatratra ny fankalazana ny tsingerintaonan'ilay horohorontany tao Wenchuan amin'ny volana May hoavy.
Navoakan'ireo mpisehatry ny Twitter ilay lisitra avy amin'i Ai Wei-wei, maro ihany na izany aza ireo bilaogera sy mpisera amin'ny aterineto no afaka nanjohy ilay fifanakalozandresaka. Bai Yu-ji avy amin'ny my1510 manao fanomezamboninahitra feno fanajàna ho an'ilay hetsika santatra nataon'i Ai, ary manakiana ireo manampahefana noho ny nandevenany ireo razana tsy nisy fanadihadiana natao na fanazavana mendrika akory:
Marina aloha fa tsy haintsika ny antony nahafaty azy ireo, saingy haintsika fa maty ry zareo, fa tsy hoe nanjavona. Rahalahy / anadahy sy rahavavy / anabavintsika foana izy ireny, fianakaviana sy zanatsika. Tsy maintsy hoe olona manana fo vato sy tsy mifaditr'ovana vao mahavita manaisotra sy mandevina azy ireo tahaka izany
Maninona no tsy manao ezaka mihitsy na kely aza mba hananganana lisitra iray misy ireo ankizy mahantra tradoza ireo? Ho soa ho an'ny firenena? Firenena toy inona no manao tahaka izany? Ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka hoe? Olona toy inona no mety ho tia an'izany? Tena tsy vitako ny haka an-tsaina izay antony. Ahoana ny zavatra faran'izay kidaladala sy tsy misy dikany tahaka izany no afaka nitranga…